I-TECH TYCOON DROPS I-30 YEZIGIDI ZEEDOLA KWINDLU YECALABASAS - UYILO LWEKHAYA
I-Tech Tycoon Drops i-30 yezigidi zeedola kwiNdlu yeCalabasas
UJustyn Howard ngomnye umrhwebi kwezobuchwephesha oye wakwazi ukubetha ukuhlawula ubumdaka kule minyaka ilishumi idlulileyo. Umntu oneminyaka engama-40 ubudala wafumana ikhefu lakhe elikhulu ngo-2010 ngokusungulwa kokuqalisa kwakhe Ukuhluma kweNtlalo , inkampani yolawulo lweendaba zosasazo. Ukusukela ngoko inkampani iye yathengiswa esidlangalaleni kunye ne-NASDAQ edweliswe kwi-tech behemoth exabisa ngaphezulu kwe-5.5 yezigidigidi.
Njengabaninzi kumdlalo wobuchwephesha, uWoward ulahla amanani amakhulu kwipropathi kulo lonke elaseMelika. Kunyaka ophelileyo uye wakhupha i-20 yezigidi ezipholileyo kwilifa laseMalibu, kwaye kule veki uphakamise i-ante ngendlu yezigidi ezingama-30 zeedola eCalabasas.
iintlobo zokubiya izinja
Ukufunyanwa kwangoko kukaHoward kwakhiwa ngo-2020 kwaye kubekwe kwii-Estates ezigadiweyo kwisango laseOaks eCalabasas, eCalifornia. Eyilwe nguMike Palumbo ka Uyilo lwePalumbo , ikhaya eliqhekezayo elinemilinganiselo emithathu ligubungela i-22,000 yeenyawo zenyawo kwaye lihleli kwii-1.75 iihektare. Ichazwe njengesiFrentshi sanamhlanje, ifa langoku linombala ongathathi hlangothi (cinga abamnyama, ngwevu, kunye nabamhlophe) ecaciswa yimizobo enemibala kunye neefenishala ezivela kwi-plethora yeempawu eziphezulu zase-Italiya ezinje ngeMinotti, Fendi Casa, kunye neB & B Italia.
Kukho amagumbi okulala asibhozo kunye ne-14 yokuhlambela enezinto ezininzi ezintle, kubandakanya indawo yempilo kunye negumbi lokuthambisa eligcwele ishawa emanzi kunye nesauna yaseNordic. Indlu enkulu yokuhlala ineekhitshi ezintathu, indawo yokuhlambela evulekileyo enemitshini yokuhlamba, iseti yokuzivocavoca ekhaya, indawo yemidlalo bhanyabhanya, igumbi leebhiliyoni kunye nesela lewayini. Ukuba uHoward unxaniwe kukho imivalo emihlanu emanzi ethe saa kulo lonke ilizwe-igumbi lokuhlala, ibha yomgangatho ongaphantsi, ibha yephuli ye-cabana yangaphandle, indawo yokuzivocavoca iprotein, indawo yekhitshi yebar, kunye nebar yekofu yokulala.
Elona suite linendawo yokuhlambela enkulu kunye nebhalkhoni yabucala ebonelela ngeenduli ezijikelezileyo ngelixa indlu yeendwendwe evalelweyo ilungile kwabo bachitha ubusuku. Iindawo zangaphandle zibonelela ngemithwalo yendawo yokonwaba kwaye zibandakanya iphuli engapheliyo, indawo yokuphumla yomlilo, inkundla yebhasikithi, kunye nokubeka uhlaza. Kukwakhona igaraji yeemoto ezili-10 ukuze uHoward angabinangxaki ekugcineni izithuthi zakhe zodidi zikhuselekile kwaye zivakala.
Jonga eminye imifanekiso yale ndlu yeCalabasas ingezantsi kwaye uqiniseke ngokujonga U-Floyd Mayweather we-18 yezigidi zeedola zaseMalibu .
Iithayile kutshintsho lomgangatho wokhuni
Bona ngakumbi malunga - I-Crypto Billionaire Drops $ 83 yezigidi kwiPacific Palisades Mansion
zixhobo zikathixo uyilo lwe tattoo
umdwebo omnyama nomhlophe
isiqingatha sobuso isiqingatha se tattoo
umphezulu weziko lokuzonwabisa
yeyiphi ihempe zombala ezihamba neebhulukhwe eziluhlaza
izimvo zanamhlanje zeofisi encinci yasekhaya
a & d mafutha eetattoos